Sida loo abuuro bogga: beddelka kala duwan ee aad haysato | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Naqshadeynta Webka, WordPress
Hadda 60% dhammaan boggaga internetka ee la abuurayo waxay la jiraan WordPress, CMS (Nidaamka Maareynta Mawduuca) taas, iyadoo ay ugu wacan tahay kala duwanaansho weyn iyo qallooc waxbarasho oo heer sare ah, ayaa loo meeleeyay inay tahay tan ugu weyn ee ay doorteen horumariyeyaal badan iyo kuwa aan ahayn.
Laakiin kaliya ma lihin WordPress si aan u abuurno bog deg deg ah, laakiin waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo badal ah sida Blogger, Wix, Squarespace, Weebly, Shopify ama 1 & 1 Ionos. Farqiga weyn ee udhaxeeya waa xalka ay bixiyaan iyo waxkasta oo aad qaban kartid iyo waqtiga iyo dadaalka loogu baahan yahay si loo gaaro. Waxaan ku bilaabi doonnaa midka ugu fudud si aan u aadno xulashooyinka aadka u murugsan.
5 Soo iibso
9 Ka abuur shabakadda 0
10 Layaabka ugu dambeeya: ku abuur boggaaga Github
Wix hadda wuxuu noqday mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee lagu beddeli karo sameyso bog si fudud daqiiqado gudahood. Waa barxad khadka tooska ah kaa badbaadisa dadaalka barnaamijka, barashada wax yar oo CSS ah ama ogaanshaha HTML ujeeddooyinka qaarkood.
Waxaad si fudud u dooran doontaa qaar ka mid ah arrimo (tayo sare leh) dhinaca), dooro inaad iskaa u sameysatid cinwaankaaga oo aad u jiidatid oo aad u daadatid si aad u sameyso degel aasaasi ah daqiiqado gudahood. Mid kale oo ka mid ah wanaagga ugu weyn ee Wix ayaa ah in loogu talagalay mobilada, sidaa darteed waxaad yeelan doontaa wax kasta oo lagu sameeyo shaxanka aasaasiga ah.
Naafada keliya ayaa ah in Wix uu imanayo aad u fiican bogagga aasaasiga ah ku qor bogga soo degida ama kuwa muujinaya adeegyadeena, laakiin haddii aan mar horeba dooneyno wax aad u adag, sida abuuritaanka ecommerce ama mid loogu talo galay inuu boos sii qabsado ka dibna la sameeyo wax soo iibsi jireed, waa inaan helnaa waddo kale.
Haddaan rabno uun dhis baloog waxaan leenahay mid aad u fudud, maadaama Blogger uu noo ogolaanayo inaan yeelano blog daqiiqado gudahood. Dabcan, waxaa lagu martigelin doonaa server-yada Google magaca madal ayaa ka muuqan doonta URL-ka.
Weli, waa xalka ugu fiican kuwaas taasi ma rabto inay ku bixiso shilimaad, waxay rabaan inay lahaadaan baloog lagu daabacay daqiiqado oo xitaa waxay ku dari karaan astaamo dheeri ah oo leh sheybaarada iyo aasaaska qaar. Ha isku dayin inaad ku abuurto wax aad u qabow Blogger, inkasta oo haddii ay tahay inaad soo bandhigto waxyaabo tayo leh, waa hab aad uga fiican sidii aad ku gaari lahayd isticmaaleyaal badan.
Beddel kale oo lagu abuuro bog internet, inkasta oo ayna bilaash ahayn. Laakiin waxay noo ogolaaneysaa inaan kor u qaadno ganacsigeena iyada oo ay ugu wacan tahay qaabyaasheeda, in kasta oo aysan si ku filan ugu shaqeyn sida kuwa Wix.
Way fududahay in la dhiso degel leh 1 & 1 Ionos ka badan WordPress, gaar ahaan haddii aan leenahay ganacsi yar oo u baahan in uu ku yeesho boggiisa shabakadaha shabakadaha oo aan wax fikrad ah ka haysan barnaamij ama waligeen ma soo marin CMS sida WordPress.
Xalkani wuxuu leeyahay saddex qorshe oo lacag bixin ah oo lagu dhisayo boggaaga, sida mid diiradda saaraya ecommerce. Sidii aan soo sheegnay, haddii ay tahay inaad iibiso repertoire yar oo ah alaabooyinka, waxay noqon kartaa beddel xiiso leh haddii aadan u baahnayn wax kakan.
Weebly waa mid kale heshiis weyn u ah ganacsiyada yaryar taasna waxaa lagu gartaa iyadoo si fiican looga taxadarayo arrinta SEO. Waa inaad ahmiyad weyn siisaa meelaynta mashiinka raadinta, maxaa yeelay haddii websaydhkaagu kuxiran yahay talooyinka isticmaale ee raadinta, illaa iyo intaad ka heli weydo bartaada barta SEO-ga, waxaad ku yeelan doontaa wax aad u adag, haddii aan macquul ahayn.
Weebly sidoo kale waxaa lagu gartaa iyada sahlanaanta isticmaalka mahadnaqiddaas jiitinta ah oo hoos u dhig waxay bixisaa. Dabcan, iska ilow inaad awood u leedahay inaad dib u soo celiso degellada aad haysato oo aad u diyaar garowdo inaad wax yar ka bixiso sidii la filayay, gaar ahaan haddii aad ka tagto qorshaha bilaashka ah, ee leh Qorshayaashu waxay u dhexeeyaan $ 8 illaa $ 38 bishii.
Mana waayitaan arrimo, inkasta oo ay aad uga fog tahay kuwa Squarespace iyo Wix. Dabcan, waad gali kartaa arrimaha koodhka si aad uhesho taabasho gaar ah websaydhkaaga.
Soo iibso ayaa hadda noqotay mid ka mid ah meelaha ugu raaxada badan ee lagu socodsiin karo ganacsigeenna iibinta dhammaan noocyada alaabta ee internetka. Maaha wax aad u adag sida sameynta ecommerce ee WordPresss, halkaas oo aan u baahan doonno waxyaabo la mid ah sida Woocommerce, laakiin waa lagu xaddidi karaa dhinacyada qaarkood; Haddii aynaan dhinac iska dhigin SEO (Search Engine Optimization), hubaal WordPress waa ikhtiyaar ka fiican.
Waxaas oo dhan ayaa yidhi, Soo iibso ayaa hadda ah mid ka mid ah e-commerce ugu jecel ayna adeegsadaan ganacsiyo badan. Waxaa lagu gartaa nidaam qurux badan oo wax soo saar, wax muhiim u ah e-commerce oo ay tahay inay maamusho boqolaal ama kumanaan alaab ah. Maanta Shopify waxay leedahay in kabadan 600.000 dukaamo firfircoon aduunka oo dhan.
Faa'iidadeeda weyn ayaa ah in dhammaan dhinacyada farsamada loo daayo masraxa iyo sidaa darteed waxaad ficil ahaan diiradda u saari kartaa abaabulka dukaankaaga, alaabtaada, sameyso jillaabyo iyo qorshooyin xeelado suuq si aad u iibiso.
Si ka duwan WordPress Woocommerce, waxay leedahay kharash bille ah taasi way ku kala duwan tahay 29 ilaa 299 dollars.
Goob kale oo weyn oo lagu dhiso boggaaga, in kasta oo aysan u sahlaneyn sida loo isticmaalo kuwa ilaa hadda la soo sheegay. Taasi waa ka mid ah kuwa leh qaabka ugu fiican waxayna siisaa tusaalooyin tayo sare leh oo la heli karo isticmaalaha. Waxay sidoo kale leedahay repertoire wanaagsan oo ah astaamo lagu xalliyo degelkeenna koowaad.
Isku-darka 'Squarespace' waan awoodnay ku dhejinaysa inta u dhexeysa sida ay u fududahay in la abuuro degel leh Wix iyo inta udhaxeysa dhib weyn in lagu sameeyo WordPress. Waa kalabar si markaa isticmaale leh waqti iyo xirfado dheeri ah, uu u qaato dadaalkiisa inuu abuuro degel websaydh ah.
ka qorshayaashu haba yaraatee ma ahan kuwo raqiis ah, laakiin maxaa yeelay waxay bixiyaan arrimo wanaagsan, waa la fahmi karaa. Waxaa sidoo kale lagu gartaa inay ahaato mid jawaab celiya moobiilka; Si kale haddii loo dhigo, waxaa loo habeeyay cabbirka taleefannada casriga ah iyo kiniinnada, wax muhiim ah maanta haddii aad rabto inaad sameysato degel.
Qorshooyinka Isku-dhafka ayaa la dhaafayaa laga bilaabo 12 illaa 40 doolar bishii. Waxaan ku soo celineynaa sida kuwa kale ee kale ay yiraahdeen, haddii aan rabno wax gaar ah oo ku saabsan degelkeenna xitaa Squarespace ma awoodo inay na siiso
Iyadoo loo marayo WordPress waxaan u gudbeynaa CMS oo dhan oo haddii aan dhigno Drupal agtiisa, mid ka mid ah kaas oo qalooca waxbarashadu aad uga gaabinayo waana lagama maarmaan in la galo barnaamijka PHP (in kasta oo aan loo baahnayn), way ka fududdahay. Waxa ugu fiican ee ku saabsan WordPress waa inaad awoodid si fudud u soco, ku rakib mawduuc bilaash ah oo tayo leh, hel martigelin saacado gudahoodna waxaad lahaan doontaa degel tayo leh oo la yaab leh.
Ama, waad adagtahay, qaado mawduuc nadiif ah oo bilaw barnaamij si aad u abuurto websaydhkaaga oo loogu talagalay blogging, ecommerce ama nooc kasta oo degel ah, tan iyo Fursadaha WordPress waa kuwo aan dhammaad lahayn maanta. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sababta aad u dooran karto inaad barnaamijka ku sameyso boggaaga WordPress, waana sababta oo ah mawduuca SEO, mid ka mid ah sababaha ay dad badani u doortaan inay sameeyaan dadaal yar oo ay bartaan sida loo isticmaalo WordPress.
Taasina waa WordPress-ka, iyada oo ay ugu mahadcelinayaan bulshadeeda weyn ee weyn, iyo iyada oo loo marayo mawduucyadeeda iyo waxyaallaheeda, awood u yeeshay inuu si xawli ah u koro sanadihii ugu dambeeyey. Haddii aad rabto inaad ku quusto adduunka WordPress, waxaan kugula talineynaa mawduuc iyo bog dhise jiid-iyo-dhibic:
Oceanwp- Waxay dhaaftay 1 milyan oo rakib ah imikana waa mawduuca ugu fiican ee WordPress. Ka jawaab celinta mobilada, ku habboon in lala isticmaalo Woocommerce (madal iibinta khadka tooska ah ee aasaasiga ah) oo lagu nadiifiyo koodhka iyo fursadaha ay tahay in lagu kordhiyo astaamaheeda iyada oo loo marayo kumbuyuutarrada u gaarka ah iyo fidinta.
Qalab: waa qaabka ugu wanaagsan ee hadda loo isticmaalo WordPress. Iyadoo lala kaashanayo Oceanwp waxay sameystaan ​​labo duurjoog ah si ay u abuuraan degello tayo sare leh oo heer walba leh. Taasi waa, loo habeeyay labadaba xawaaraha websaydhka, shaqooyinka kala duwan, oo lagu hagaajiyay SEO iyo kakooban waxyaabo kala duwan. Waa inaan dhahnaa inaad sida ugu fiican uga soo baxdo adoo helaya nooca 'Pro elementor', gaar ahaan noocyo badan oo widget ah si loo abuuro dhammaan noocyada shabakadaha.
Arimaha kale ee la tixgalinayo oo ah kuwa hada ugu fiican waa GeneratePress iyo Astra Theme Waxay joogaan heerka Oceanwp. Si kastaba xaalku ha ahaadee, waa in mid ama mid kale la isku dayo in la arko midka nagu habboon xalka aan raadineyno.
WordPress ayaa bixisa noocyo badan oo fiilooyin ah oo loogu talagalay dhammaan noocyada hawlaha sida amniga bartaada, keydinta iyo u guurista websaydhkaaga URL kale ama nuqul ka mid ah oo ah keyd ahaan, nuxur firfircoon oo lagu abuurayo bogag ganacsade ah oo xitaa noo oggolaanaya inaan qaabeyno desktop-ka si aan ugu helno sida aan dooneyno.
Qaarkood ka mid ah waxyaabaha ugu caansan WordPress Iyagu waa kuwan oo xitaa waxay kuu oggolaanayaan inaad abuurto degello leh waxyaabo firfircoon:
Meelaha Gaarka ah ee Casriga ah: wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto goobo firfircoon oo aad ku abuuri karto dhammaan noocyada bogagga nooc kasta oo alaab ah. Iyadoo lala kaashanayo Elementor waa si fudud bahalnimo.
Yoast SEO: mid ka mid ah plugin heer sare ah heer si loogu meeleeyo websaydhkeenna si buuxda loo habeeyay. Xitaa waxay kuu ogolaaneysaa inaad sameysid khariidado mareeg ah si guurguurayaasha Google ay u kormeeri karaan boggayaga si ka wanaagsan.
WooCommerce: nidaamka saxda ah ee lagu abuurayo e-meheraddaada oo lagu garto inaad haysato wax kasta oo aan u baahan nahay si aan u haysano dukaankeenna internetka. Thanks to bulshada weyn ee ka jirta WordPress, waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo dheeri ah oo kordhiya astaamaheeda.
Dhamaantood waxay ku jiraan Hal WP Hijro: waa aaladda ugufiican ee loo guuro bogagga internetka oo dhan iyo abuurista keyd haddiiba ay dhacdo.
Oggolaanshaha cookie GDPR: in lala socdo wax walboo ku saabsan sharciga cusub ee Yurub ee ilaalinta xogta.
Rabshad WP: qalabka ugu fiican (in kasta oo la bixiyo) si loo hagaajiyo rarka websaydhkaaga, dhammaantood si otomaatig ah.
Ugu dambeyntiina taas ayaan kuu sheegayaa waxaad isticmaali kartaa nooca webka ee WordPress in, inkasta oo ay xadidan tahay, waxay kaloo bixisaa fursado badan; Sida Blogger oo kale, maaddaama oo ay waxyaabo badan oo isku mid ah ka tahay xalka ay bixiso oo daqiiqado gudahood waxay noo oggolaanaysaa inaan yeelano baloog.
Drupal waa CMS kale, laakiin sidaan soo sheegnay, qalooca barashada ayaa waqti dheer kugu qaadan doona. Marka taa laga reebo aqoonta barnaamijka ayaa loo baahan yahay, inkasta oo ay run tahay in la furo bogagga aasaasiga ah waxaan jiidi karnaa qaybaha iyada oo aan loo sii marin barnaamijka. In kasta oo dabcan, si aan u gaadhno heerka websaydhyada qaarkood ee aan ku samayn doonno 'Squarespace', waxaan u baahan doonnaa inaan si adag u shaqeyno oo aan aqoon u leenahay CSS.
Drupal waa CMS ay adeegsadaan shirkadaha taas oo ay ku leeyihiin barnaamijyo iyo runta in heerkaas la gaarayo ay abuuri karto bog kasta oo maskaxda ku soo dhaca. Waa CMS bilaash ah sida WordPress sidoo kale waxaa lagu gartaa muuqaalkeeda qaabaysan, in kasta oo wixii la sheegay ay ka mid yihiin kuwa ugu adag.
Waxay leedahay Websaydhada NASA iyo meelo kale sida Casablanca. In kasta oo ay ugu dambayntii bilaabeen degel cusub oo ay la socdaan WordPress; waxyaabaha horumarka.
Ka abuur shabakadda 0
Dabcan, dadaalku wuxuu noqon doonaa mid qiimo leh, iyo sidoo kale waqtiga lagu ogaanayo sida loola dhaqmayo luqadahaas. Haddii aan guuleysano, waxaan dooran karnaa inaan daabacno degello cabsi leh oo si fiican loo hagaajin doono. Waxaan sidoo kale Waxaan u dhisi karnaa nolol sidii xirfadle horumarinta webka iyo in, habka, iyagu ma ay qaadaan wax jaban. Waxaan kugula talineynaa inaad inbadan ka fiirsato waxa loola jeedo noqoshada horumariye.
Layaabka ugu dambeeya: ku abuur boggaaga Github
- Github, marka laga reebo inuu yahay madal heer sare u ah horumarka iskaashiga Adoo kuu oggolaanaya inaad martigeliso mashruuc adigoo adeegsanaya nidaamka xakamaynta nooca 'Git', waxay kaloo kuu oggolaaneysaa inaad ku martigeliso degel internet kuu gaar ah oo lacag la'aan ah.
Faa'iidada weyn ee isticmaalka Github furitaanka websaydhkaagu waa eber kharashWaa inaad abuurtaa degel HTML rasmi ah walow. Waxa ugu fiican oo dhan waa inaad haysato barnaamij desktop ah oo aad talaabooyinkaaga ugu horreeya ku qaadi karto HTML si aad u hesho degel aasaasi ah.
Waa inaan rakibi barnaamijka GitHub Desktop macOS ama Windows, u samee mashruuc cusub, nuqul faylasha aasaasiga ah ee shabakadda oo daabac. Haddii aan dooneyno in aan xoqno, waxaan ku iibsan karnaa xarun martigelin ah (kama badnaanayaan 10-12 euro sanadkii) oo waxaan u rogi karnaa si ay u yeeshaan shabakaddaas qiimaha ugu hooseeya.
Waxaan ku talinaynaa kuwa idinka ah ee bilaabaya inaad ku qortaan HTML oo sidaas ayaad u sii abuureysaa boggaaga si tartiib tartiib ah. Waa waxa wanaagsan ee ay haysato, inay lacag la’aan tahay. Adiguna waad layaabi doontaa waxa qaarkood ay ku sameyn karaan qaabkan daabacaadda degelka Github.
Y Sidan ayaan ku dhammeyneynaa dib-u-eegistaan ​​xulashooyinka kala duwan ee aan gacanta ku hayno si loo abuuro degel loona furo shabakadaha shabakadaha. Dhammaan xulashooyinka hadda jira WordPress ayaa ku guuleysta dhowr sababood awgood. Bulshadeeda weyn, kumanaan kun oo fiilooyin ah, mawduucyo bilaash ah oo lacag la'aan ah oo lacag la'aana iyo sida ay u fududahay in la bilaabo barnaamij ku saleysan mowduuc.
Dabcan, hadaadan rabin inaad waqti lumiso iyo bilaabaan degel aasaasi ah ama ecommerce Iyada oo leh tiro aad u tiro badan oo wax soo saar ah, waxaad haysataa waxyaabo kale oo waxyaabo badan kuu fududeyn doona. Hadda waxaa jira oo keliya rabitaanka ah in la sameeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » WordPress » Ikhtiyaaraadee ayaan u haystaa inaan abuuro bog internet
Dhab ahaan ?????????????????????????
Wordpress loogu talagalay degel xirfadle ah ????????
Abuuritaanka degel yar oo ka duwan blogka oo leh khiyaano, ugu yar waa Drupal ama Joomla. Cabsi la'aan, khilaaf la'aan, cunid la'aan, iyo kumanaan iibka iibka gadaal behind.
Iyada oo ay jirto dabacsanaanta sifiican looga fekeray, CMS-yada si wanaagsan loo qaabeeyay oo ay kujiraan diirkja awood leh iyo kuwa dareeraha ah ee aan u baahnayn inay ku wareegaan fiilooyinka fiilooyinka waalidiinta aan la aqoon
Fadlan dadka ha siriqsan. WordPress waa blog hal miis ah; taasi waa wanaagiisa iyo ciribtirka weyn ee Achilles. Maaha, si kasta ha noqotee, CMS-ga dareeraha si loo abuuro degello qurux badan ama dukaamo internetka ah In kumanaan kun oo wakaaladda sawir qaadayaasha ah ee bilaa camalka ah aysan rabin ama aysan aqoon sida loo barto buug fudud oo loogu talagalay Joomla, Drupal, Prestashop ama EE (tusaale ahaan) ayaa wax badan ka sheegaya naftooda marka loo eego qalabka ay isticmaalaan.
Dabcan, haddii aad u fahamto bogagga internetka inay yihiin wax ka badan dhowr bog oo leh badhanno iyo midabbo si aad u wareerto macmiilkaaga.
Ku jawaab Miguelangel
Waqtigan xaadirka ah runti shaki ayaa laga qabaa in WordPress aanad sameyn karin bogag xirfadleyaal ah?
Waxaan fahamsanahay in Drupal aad si dhammaystiran u abuuri karto degel dhammaystiran oo la jaanqaadi karo iyada oo aan culeyskaas laga helin WordPress plugins, laakiin adeegsadayaal badan oo aan rabin inay maraan PHP iyo kuwa aan lahayn aqoon sare ee barnaamijyada, WordPress waa wax ka badan dhammaystirka xalka.
Xaqiiqdii WordPress wuxuu hadda ku jiraa in ka badan 34% bogagga la daabacay iyo 60% ee CMS. Iyo Drupal? Miyuu ku sii jiraa 1,5% dhammaan boggaga internetka? (Xogta W3Techs)
Taasi waxaan kula jiraa taas oo loogu talagalay degel u heellan oo la habeeyay, Drupal, laakiin xalal kale oo badan, ecommerce, baloogyo, bogagga degitaanka iyo in ka badan, WordPress waa xalka guul ka badan.